ဒါကတော့ FBI CIA NSA Software Faces v4.0 ဆော့လ်ဝဲလေးဖြစ်ပါတယ် သူကတော့ FBI တွေမှာသုံးတဲ့ဆော့လ်ဝဲလေးပါ မျက်နှာအစိတ်အပိုင်း အမျိုးမျိုးပါပါတယ် (ဥပမာ) ပြောရရင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ဒုက္ခပေးသွားတယ်ဆိုပါဆို့ အဲဒီအခါမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကို မှတ်မိနေရင် ဒီဆော့လ်ဝဲလေးနဲ့ မျက်နှာပုံဖေါ်နိုင်ပါတယ် စိတ်ဝင်စားရင်စမ်းကြည့်လိုက်ပါ လိုချင်ရင်အောက်မှာ အဆင်ပြေမဲ့လင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။ 307.66mbDownload ifile.it ၊ part1 ၊ part2 ၊ part3 ၊ part4 ၊ part5 ၊ part6 ၊ part7Download Mediafire ၊ part1 ၊ part2 ၊ part3 ၊ part4 ၊ part5 ၊ part6 ၊ part7 Read More
all kis and kav keys
ကဲ လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ kis and kav keys အသစ်တွေ ကို တင်ထားပေးပါတယ် . လိုင်းသိပ်မကောင်းလို့ ရတဲ့ တစ်နေရာကနေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . ရသလိုနဲ့ ဖြစ်သလိုလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. program ဖိုင်အကြီးများကို တင်ပေးတဲ့ ညီလေး မြင့်ဇော်ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. Download ifile.it
လိုချင်သူများ Online အနေဖြင့် ရှာချင်သူများအတွက် online Dictionary တွေကို စုပြီးတော့ ဒီပို့စ်မှာပဲ တင်ပေးပါ့မယ်. အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ. http://dictionary.all-channel.com ဆိုက် အတွက်ကတော့ ဒီဖောင့် ကို Download လုပ်လိုက်ပြီး ထည့်ထားမှ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. (၁) http://dictionary.all-channel.com(၂) http://www.burmese-dictionary.org(၃) http://www.ornagai.com/
မေး - အကို ညီနေမင်း animation လုပ်နည်း ရေးပြီးတင်ပေးမယ်ဆို တင်ပေးပါ့လားဗျာဖြေ - ညီလေးရေ animation က ဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲ flash animation လုပ်ချင်တာလား ဒါမှမဟုတ်ရင် ရိုးရိုး photoshop နဲ့ animation လုပ်ချင်တာလား. Photoshop နဲ့ animation လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ http://www.mmphotoshop.net မှာ အသေးစိတ်ရေးပေးထား ပါတယ် . အတော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ် . အသေအချာ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ ဓါတ်ပုံတွေပါ ပါတဲ့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ် . စာအုပ်ကိုလဲ မှာ တင်ထားပေးပါတယ် . စာအုပ်ထဲမှာတော့ tools တွေအကြောင်း ရှင်းပြထားတာနဲ့တင် ပြည့်နေတာ . အသုံးပြုပုံ နမူနာကိုတော့ သိပ်မတွေ့ရဘူး . အစ်ကိုပြောတဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်မှာ အရင်လေ့လာပါ . ထပ်ပြီးလိုလာရင် အစ်ကို နောက်ထပ် photoshop ၀ဘ်ဆိုက်အသစ်တွေ ပေးပါဦးမယ် . flash ကတော့ တင်ရမည့် program က ကြီးတာရော. နဲနဲလေးခက်တာကောကြောင့် တကယ်တမ်း ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် အတော်လေးကို လုပ်ပြရမှာပါ . တစ်ခုလုပ်ပြဖို့အတွက် အနည်းဆုံး ပုံတွေအတော်များများ သုံးရမှာပါ . ရန်ကုန်မှာ flash အတွက် စာအုပ်တွေ ထွက်နေပြီကြားတယ် . ညီလေး ၀ယ်ဖတ်လိုက်ပါ . flash ကတော့ နည်းနည်း လက်ဝင်တယ်လို့ ကြိုပြီးပြောပါရစေ . အရင်ဦးဆုံး animation အကြောင်းကို လေ့လာဖို့အတွက် photoshop နဲ့ စပြီးလေ့လာစေချင်ပါတယ် .မေး - Lo:ကျွန်တော်အိမ်ကpcကိုwindowအသစ်တင်လိုက်တာအသံအထွက်တော့ပါဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကို။ နောက်ပြီးတော့Rar file software မ၇ှိတော့ပါဘူး။ အဲ့ပါကြောင့် Rar software လိုချင်ပါတယ်။ တင်ပေးပါဦး။ဖြေ - ကြည့်ရတာ ငါ့ညီ တင်လိုက်တဲ့ window က xp sp3 ဖြစ်ဖို့များပါတယ် . window xp sp3 မှာကတော့ audio အတွက် အတော်လေး အခက်အခဲဖြစ်ကြပါတယ် . အစ်ကို ဖြေပေးထားပါတယ် . audio အတွက်ပါ . အဲ့ဒါနဲ့မှ မရရင်တော့ ငါ့ညီရဲ့ motherboard အမျိုးအစားကို မေးလ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ ပြောပြပေးပါ အစ်ကို audio driver တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ် . win rar ကိုတော့ အစ်ကို ဒီမှာ လိုင်စင် version ကို တင်ပေးထားပါတယ် . win rar ကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ် ဆိုတာကိုလဲ အဲ့မှာ movie နဲ့ တစ်ခါတည်း ရှင်းပြထားပါတယ် . မေး - Wai: အကိုရေ အဲဒီဖိုင်မှာ ဗိုင်းရပ်စ် ပါနေတယ်လို့ norton ကပြနေပါတယ်. ကျေးဇူးပြုပြီးပြန်စစ်ပေးပါဦးဖြေ - ညီလေး wai ရေ အဲ့လို program တွေလို keygen, patch, crack စတာတွေကို antivirus program တွေက virus အနေနဲ့ပဲ သိကြတယ်ဆိုတာကိုလဲ အစ်ကို ပို့စ်တော်တော်များများမှာ ပြောပြထားပါတယ် . အစ်ကိုတို့တင်တဲ့ ဘယ် program တွေမှာမှ virus ကို တင်မပေးပါဘူး . စိတ်ချလက်ချ Download လုပ်ပြီး စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ် . ညီလေးကို တစ်ခုအကြံပေးချင်ပါတယ် . norton ကို သုံးတာထက်စာရင် kaspersky ကို သုံးတာက ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် . norton ရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုက offline update တစ်ခုအတွက်ပဲ အားသာတာပါ. တစ်ကယ်တမ်း သုံးမယ်ဆိုရင် security ပိုင်းကို အရမ်းနေရာယူထားတာ များတော့ စက်တစ်လုံးကို စဖွင့်တာနဲ့ program သုံးတဲ့အချိန်တွေမှာ အရမ်းကို နှေးသွားပါတယ် . ဒါလေးကို norton သုံးတဲ့သူတိုင်း သတိပြုမိမှာပါ . norton နဲ့ kaspersky ကို ယှဉ်ပြီးတော့ သုံးကြည့်လိုက်ပါ . ညီလေးသိလာပါလိမ့်မယ် . norton ကိုဖြုတ်ပြီးလို့ kaspersky ကို ပြောင်းတင်တဲ့အခါမှာ အခက်အခဲဖြစ်နေတယ် တင်လို့မရဘူး. error ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင် ဖြစ်နေတာကို မေးလ်ပို့ပေးပါ. အစ်ကို ဖြေပေးထားတာ တွေလဲ ရှိပါတယ် . ဒီမှာ လိုက်ဖတ်လိုက်ပါ . အဲ့ဒါ အမေးအဖြေတွေ ချည်းပါပဲ . လိုက်ဖတ်သင့်တယ်လို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်. အဲ့ထဲမှာ အခက်အခဲတစ်ချို့ကို ရေးပေးထားပါတယ် . လိုအပ်ရင် ပုံတွေနဲ့ပါ တင်ပေးထား ပါတယ်. မေး - saiheart ကျွန်တော် window ပြောင်းတင်ချင်လို. အဲ.ဒါဘယ်လို လုပ်ရမှာလဲအကိုဖြေ - ညီလေးရေ window တင်နည်း မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို ဒီမှာ တင်ပေးထားပါတယ်. Download လုပ်ပြီးတော့ ဖတ်ပြီး window တင်ကြည့်လိုက်ပါ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်.
ဒါကတော့ Unlock All Mobile Phones ဖြစ်ပါတယ် အရင်ကပို့စ်မှာတင်ခဲ့ပြီးပါပြီ ဒါကတော့ ညီတစ်ယောက်က (Motorola Phone အတွက်ကော ရနိုင်မလားခင်ဗျာ) မေးထားလို့ အခုတင်ပေးလိုက်ပါပြီး Unlock လုပ်နိုင်တဲ့ အမျိုးအစားတွေကိုတော့ ပုံမှာပဲကြည့်လိုက်ပါ အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် လိုချင်ရင်အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ။ 24.73mbDownload ifile.it | Download Mediafire
ဒါကတော့ Mobile အတွက် Animated Wallpapers လှလှလေးတွေပါ မိုဘိုင်းသုံးသူများ အတွက် Wallpapers လှလှလေးတွေတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် ပုံတွေအများကြီးပါတယ် ပုံ 150 တောင်ပါတယ် လိုချင်ရင်အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။ 24.26 mb
ကွန်ပျူတာ ဘတ္တရီနှင့် ဖုန်းဘတ္တရီတွေ ဘာ့ကြောင့် တာရှည်မခံရသလဲ
ဖြိုးရဲ : အစ်ကိုညီနေမင်း ကျွန်တော့် laptop က ၀ယ်ထားတာ မကြာသေးဘူး ဘတ္တရီက နာရီဝက်လောက်ပဲ ရတယ် . သူများတွေကျတော့ နှစ်နာရီ သုံးနာရီလောက်တောင် ရပါတယ် . ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲ အကြံဥာဏ်လေး ပေးပါဦး .ဖြေးကျွန်တော် ၀ဘ်ဆိုက်နှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ မရေးဖြစ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ connection အခက်အခဲနှင့် ကျန်းမာရေး အတွက်နဲ့ မို့ပါ . အားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက် ပါတယ် . အားလုံးပဲ လုပ်ငန်းကိုင်တာများ အဆင်ပြေ ချောမွှေ့ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . အဆင်ပြေပါစေလို့လဲ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ် . နောက်ပိုင်း နည်းပညာများကိုသာ အသားပေး ရေးသားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် . ကိုဖြိုးရဲရေ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သိသင့်တဲ့ တစ်ချက်ကို လူတော်တော်များများ မသိတာလား . သိရဲ့သားနဲ့ အပျင်းကြီးတာလား တော့ မသိပါဘူး . ဘတ္တရီအခြောက်မှန်သမျှ phone, ups, နှင့် laptop မှာပါတဲ့ ဘတ္တရီအားလုံးကို သုံးတော့မယ်ဆိုရင် မူလပထမ ၀ယ်စဉ်တုန်းက ပါတဲ့ ဘတ္တရီအားကို ကုန်အောင်သုံးလိုက်ပါ . ကုန်တဲ့အချိန်အထိ အားသွင်းကြိုးကို မထိုးရပါဘူး . အားကုန်ပြီဆိုတာနဲ့ စပြီးတော့ ဘတ္တရီကို 24 နာရီ ပြည့်တဲ့ အထိ အားသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ် . အားသွင်းနေစဉ် ကာလအတွင်း (charging)အားသွင်းထားတဲ့ ဘတ္တရီကို လုံးဝမသုံးရပါဘူး. 24 နာရီပြည့်ပြီးသွားတာနဲ့ စပြီးတော့ သုံးလို့ရပါပြီ . အဲ့လို နာရီအပြည့်သွင်းထားတဲ့ ဘတ္တရီနှင့် နာရီအပြည့်မသွင်းထားတဲ့ ဘတ္တရီကို ယှဉ်ပြီးသုံးကြည့်လိုက်ပါ . 24 နာရီကြာအောင်အထိ အားသွင်းဖို့ စိတ်မရှည်ဘူးဆိုရင်တောင် 14 နာရီကို အနည်းဆုံးထားပြီးတော့ (charging)အားသွင်းပေးရပါတယ် . ဒါဟာ ဘတ္တရီတစ်လုံးအတွက် ပထမဦးဆုံးသွင်းတဲ့ အားဟာ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ် . အခုပြောတဲ့နည်းကို သုံးကြည့်လိုက်ပါ . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . Read More
BestAddress HTML Editor 2010 Pro 16.1.0
ဒါကတော့ BestAddress HTML Editor 2010 Pro 16.1.0 ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆော့လ်ဝဲကတော့ ဘလော့သမားတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ် သူက HTML Editor ပြန်ရေးတဲ့ ဆော့လ်ဝဲပါ လွယ်ပါတယ် စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ။ 6.38 mbDownload ifile.it | Download mediafire
ကွန်ပျူတာ ဘတ္တရီနှင့် ဖုန်းဘတ္တရီတွေ ဘာ့ကြောင့် တာရှ...